mairie-antananarivo – CUA: Fanadiovana sy fikaohana fako sy fotaka goavana
auteur 7 desambra 2017 Commentaires fermés
Nanao fidinana ifotony tetsy Ankadimbahoaka teo amin’ny lakandranon’ Andriantany androany ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky, teo koa ny mpanolotsaina manokana Marc Ravalomanana, sy ireo solombavambahoaka avy ao amin’ny boriboritany ary ireo delegen’ny Boriboritany 6 eto an-drenivohitra.
Nisantatra ny fampiasana ny fitaovana harifomba vaovao fanadiovana sy fandavahana ary fikaohana fako sy fotaka (chenille dragueur) izy ireo tamin’izany, izay entina manadio ny lakanandron’Andriantany mba hikoriana tsara ny rano ary ho fisorohana ny tondra-drano amin’ny faritra iva eto Antananarivo Renivohitra, sy ireo toerana maloto rehetra eto Antananarivo Renivohitra ihany koa. Araka izany dia tsy mijanona androany ihany ny fanadioavana fa hitohy hatrany, hisy ny fiaraha-miasan’ny Kaominina amin’ny mponina manodidina ny fanaovana izany.
Nanambara ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana fa ny tanjona amin’izao fanadiovana izao dia mba hahitana ny tanàna milamina sy vahoaka madio ary tokony ho saropiaro amin’ny tanàna isika hoy izy. Araka izany dia manentana hatrany ny vahoaka ny ben’ny Tanàna hanadio ary ho jerena ny fanampiana ny fitoeram-pako. Nanambara koa ny mpanolotsaina manokana Marc Ravalomanana fa tsy miandry pesta vao hanao hetsika fa tonga dia fanadiovana no atao miaraka amin’ny fitaovana harifomba ary tsy misy resaka politika fa fampandrosoana ny tanàna no atao.